DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA CANON F151300 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Isi Ndị ọkwọ ụgbọala
Ebe ọkwọ ụgbọala maka Canon F151300 Printer
N'oge na-adịghị anya, onye ọrụ PC ọ bụla ga-eji faịlụ ndị dị otú ahụ dị ka ebe nchekwa na archive - mmemme ndị na-arụ ọrụ na ụdị faịlụ a, na-enye ohere ime mkpakọ data, na-etinye ya na otu faịlụ, yana ihe niile a na-eme maka arụmọrụ ndị a. Archivers enwetawo ewu ewu, ebe ha na-echekwa ohere diski ma zipu ọtụtụ faịlụ dị ka otu usoro.
7-zip - usoro nchekwa ihe na ikikere n'efu. Nke a bụ otu n'ime ngwa ndị kachasị ewu ewu n'oge ahụ, n'ihi ntụgharị dị mfe, ọnọdụ nkesa n'efu, nkwado maka isi ihe ndekọ archive na ogo dị mkpirikpi faịlụ. A na-atụle isi ọrụ nke 7-zip na ebe a.
Njikwa faịlụ (mkpakọ)
Dịka nyocha ndị e mere na usoro 7z na zip, ihe nchekwa nchekwa ahụ dị mma karịa mmemme ndị ọzọ na-akwado usoro mkpakọ faịlụ (dịka ọmụmaatụ, WinRar). Ma, ọ gaghị ekwe omume ikwu okwu n'ezoghị ọnụ banyere uru pasent nke usoro ihe a na ndị ọzọ, ebe n'ọtụtụ ụzọ, ihe niile dabere na usoro nke faịlụ ndị isi. Dịka ọmụmaatụ, data multimedia na-ejikọta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu.
Ekwesiri ighota na ọsọ nke mkpakọ faịlụ site na 7-zip dị ntakịrị karịa nke ihe omume nchekwa ihe ndị ọzọ. Ma ọ bụrụ na ọ dị oke egwu, mgbe ahụ, oke mgbatị ahụ zuru oke na-ekpuchi mwepu a.
7-zip na-akwado usoro ndị a: 7z, ZIP, BZIP2, GZIP, TAR, ARJ, CAB, DEB, DMG, CHM, CPAR, RFS, LZH, LZMA, MSI, UDF, WIM, XAR , XZ na Z (maka ọrụ iwepụta faịlụ site na ebe nchekwa).
Ndepụta nke usoro maka mkpakọ bụ obere ihe - 7z, ZIP, BZIP2, GZIP, TAR, WIN, XZ
7-zip na-enye gị ohere ịlele eziokwu nke faịlụ ọ bụla dị na archive. Nke a dị mfe, dịka i nwere ike. dịka ọmụmaatụ, lelee iguzosi ike n'ezi ihe nke ebe nchekwa, tupu iziga ya na onye ọrụ ọzọ.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwere ike gbakọọ checksum nke archive.
Ihe nchekwa ahụ na-enye onye ọrụ ohere iji tinye paswọọdụ na ya mgbe ị na-ekepụta ihe.
Uru nke 7-Zip:
Ntugharị dị mfe, nke nwere njirimara
Njikwa mkpakọ oke faịlụ
Nkwado nzuzo AES-256
Nkwado maka multi-threaded file compression
Ikike ịme ihe nyocha
Ọghọm nke 7-Zip:
Mgbe ichikota faịlụ ịhọrọ site na, a na-enye onye ọrụ ọtụtụ nhọrọ maka mkpakọ algorithms, nke nwere ike ịkpata nsogbu maka ndị ọrụ novice.
Enweghị ike iji mepee archive ezughị ezu
7-ZIP bụ ebe nchekwa nchekwa dị mfe, nke na-enweghị ike ịnweta na nke ị ga-enwe ike ịmepụta archives na-enwe ike inwe mkparịta ụka dị elu.
Download 7-zip maka n'efu
J7z KGB Archiver Peazip Winrar
7-ZIP bụ ebe nchekwa dị mfe ma dị mfe iji na-akwado usoro ndị kachasị ewu ewu ma kesaa n'efu.
Atiya: Archivers maka Windows
Onye Mmepụta: Igor Pavlov
Ịnyefe ego n'etiti ndị Wallets QIWI
Esi gbanyụọ mwepụ aka na Windows 8
Esi tinye komputa gi na iTunes
Esi hazie ASUS WL-520GC rawụta
Jikọọ ụgbọala na motherboard
Ndị smartphones dabeere na Android, dịka ngwaọrụ ọ bụla ọzọ, na-amalite iwepụ oge. Nke a bụ n'ihi ogologo oge ha ji eme ihe, nakwa maka ọdịda nke njirimara nkà na ụzụ. E kwuwerị, ka oge na-aga, ngwa ga-akawanye elu, mana "ígwè" ahụ ka dịkwa otu. GụKwuo
Mmemme maka igwu egwu na Ịntanetị na netwọk mpaghara
https://termotools.com ig.termotools.com © Ndị ọkwọ ụgbọala 2019